Samsung Galaxy Fiiro 10.1 | Androidsis
Alfonso de Frutos | | Reviews, Samsung, Kiniiniyada Android
Samsung waxay dooneysaa inay suuqa ka iibsato kiniiniyada Apple. Koobka Cupertino iPad wuxuu ku xoog badan yahay qaybta gacan bir ah, in kasta oo soo-saaraha Kuuriya uu si tartiib tartiib ah u samaynayo laftiisa. Iyo Samsung Galaxy Note 10.1 yimaado si loo miisaamo miisaanka.
Waana kaniini cusub ee Samsung ayaa u yimid inuu mideeyo khibrada kala duwanaanshaha Xusuusin iyo tan caanka ah ee reer Tab ee soo saaraha Kuuriya. Kiniin 10-inji ah, oo leh stylus xiiso leh oo Samsung Galaxy Note 10.1 ka dhigaya qalab aad u xiiso badan.
2 Shaashad la tignoolajiyada LCD.
3 Samsung Galaxy Note 10.1 Waxyaabaha
4 S-Pen, qalinka taabashada Samsung Galaxy Note 10.1
5 Xusuusin S iyo MultiView
7 Sawir gacmeed
Waxa ugu horreeya ee aad ogaato markaad qalabka soo qaadatid waa iyadii dhammeystir caag ah. Waa mid ka mid ah waxyaabaha aan ugu jeclahay shirkadda Samsung, in kasta oo ay yiraahdaan waa in la yareeyo kharashka. Sikastaba xaalku ha ahaadee, taabashadu waa wax lagu farxo waana ku mahadsan tahay culeyskeeda 597 garaam, ma cuslaanayo in la haysto muddo dheer.
Ka sokow, isaga Naqshadaynta Ergonomic waxay ka dhigaysaa haysashada kaniiniga mid farxad leh, iyada oo aan laga walwalin inaad farahayada shaashadda geliso. Intaa waxaa dheer, Stylus waxaa loo dhigaa hab istiraatiiji ah si ay aad ugu fududdahay in loo qaato si loogu isticmaalo. Waxaa jiri doona laba midab oo la heli karo, luul cad iyo cawl luul.
Shaashad la tignoolajiyada LCD.
Samsung waxay sameysaa boodbood tayo leh marka la barbar dhigo heerka Galaxy Tab, kaas oo adeegsaday darfaha TFT. Sidan oo kale, Samsung Galaxy Note 10.1 waxay isticmaashaa shaashad LCD ah oo bixisa midabbo dabiici ah iyo xagal daawasho wanaagsan, marka lagu daro inay si wanaagsan ugu dhaqmaan iftiinka dabiiciga ah. Laakiin ma laha tayada guddi Super AMOLED ah.
Taasina waa tan 150 pixels halkii inji xoogaa way ku yaraadaan. Waayahay, waa run inay u egtahay wax fiican isha qaawan, laakiin haddii aan u dhowaanno shaashadda waxaan arki karnaa pixels magacyada astaamaha, tusaale ahaan. Waxaad arki kartaa inay ka maqan tahay xoogaa qaraar ah. Inbadan haddii aan xisaabta ku darsanno inay tahay kiniin ku jihaysan isticmaalka stylus.
Samsung Galaxy Note 10.1 Waxyaabaha
Halkan waxaan horeyba u galnay dhul kale. Waana in Samsung Galaxy Note 10.1 ay tahay mid ka mid ah kaniiniyada ugu awooda badan suuqa. Marka hore, ogsoonow in kaniiniyadani garaacdo mahadsanid a 4412GHz afar-geesle Exynos 1.4 processor, waxaa ku shaqeeya 2 GB oo xasuusta RAM ah oo hubiya in qalabku u socdo sida xariir.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ah 16, 32 iyo 64GB oo ah kaydinta gudaha ah. Marka lagu daro laba nooc; mid WiFi ah iyo 3G kale. Dhammaan moodooyinka waxaa ka mid ah kamarad weyn oo 5-megapixel ah iyo kamarad labaad oo 1-megapixel ah. In ka badan oo ku filan wicitaannada fiidiyowga.
Mana ilaabi karno iyada 7.000 mAh baytariga taas oo ka dhigaysa Samsung Galaxy Note 10.1 inay leedahay 10 saacadood oo isticmaalka adag ah. Kaalay, waxaan haysannaa kiniin muddo ah. Marka loo eego nooca Android, Samsung Galaxy Note 10.1 wuxuu la yimaadaa heerka Android 4.0, in kastoo horey loogu cusbooneysiin karo Jelly Bean.
Nasiib darro TouchWiz, isdhexgalka Samsung ayaa dib uga soo muuqanaya Samsung Galaxy Note 10.1. Khibraddu haba yaraatee ma xuma, laakiin waxay sii wadaysaa inay bixiso dhibaatooyin dareerayaal mararka qaarkood aniga shaqsiyan waxaan u maleynayaa inay bixiso waxyaabo badan, iyadoo khalkhal gelinaysa isticmaale yar.
S-Pen, qalinka taabashada Samsung Galaxy Note 10.1
Mid ka mid ah awoodaha Samsung Galaxy Note 10.1 Waa qoraalkeeda waxayna muujineysaa in soo saaraha Kuuriya uu daryeelay dhammaan faahfaahinta. Si aan ugu bilowno, markaan qalinka ka qaadno, furaha yar ayaa la hawlgaliyaa kaas oo bilaabaya bar toosan oo ku taal midigta shaashadda oo leh codsiyo kala duwan.
Naqshadaynta S-Pen Waxay ka dhigaan mid aad u raaxo leh, oo ka dhumuc weyn midka Samsung Galaxy Note 2, sidaa darteed maaraynta ayaa ka raaxo badan. Intaa waxaa dheer, kiniinka Samsung wuxuu aqoonsan yahay marka aan isticmaalno S-Pen, sidaa darteed waxaan ku taaban karnaa shaashadda faraha annaga oo aan ka walwalaynin wax hawl ah.
Xusuusin S iyo MultiView
Sida iska cad S-Pen wuxuu noqon lahaa mid waxtar yar haddii aan la helin taxane codsiyo ah oo loogu talagalay Samsung stylos cusub. Waana halka ay ka muuqato Xusuusin, Buug yar oo dijitaal ah oo aan ku qaadan karno qoraalada gacanta lagu qoro, marka lagu daro ku darista sawirada, jarista ama isticmaalno burushyo kala duwan oo lagu sawiro.
Laakiin arrintu halkaas kuma eka. Hada Xusuusin S sidoo kale garanayaa qaaciidooyinka xisaabta markaa haddii aan qorno hawl ama isla'eg isweydaarsi, codsigu wuu aqoonsan doonaa qisada wuuna turjumi doonaa si Samsung Galaxy Note 10.1 u aqoonsado.
Mana ilaabi karno MultiView, Awoodda cusub ee furitaanka iyo adeegsiga laba barnaamij oo kala duwan isla waqti isku mid ah. Dabcan, shaqadani waxay ku kooban tahay codsiyo dhowr ah: shabakadda shabakadda, Xusuusin S, Xafiiska Polaris, muusigga fiidiyowga, galabta iyo emaylka.
Marka la soo koobo, kiniin aad u awood badan in Waxay ku dembaabtaa marka la eego xallinta shaashadda. Sikastaba, haddii aad rabto kiniin tayo leh, Samsung Galaxy Note 10.1 waa ikhtiyaar aad u xiiso badan in laga fiirsado.
Polycarbonate way dhammaatay
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy Note 10.1
Launcher Android: LG Launcher dhammaan qalabka